श्रीमानले गरे घर निकाला- कारण सुन्दा तपाइको होस उड्ने छ…..पूरा पढ्नु होस ।। - Daily Lokmandu
Homeरोचकश्रीमानले गरे घर निकाला- कारण सुन्दा तपाइको होस उड्ने छ…..पूरा पढ्नु होस ।।
श्रीमानले गरे घर निकाला- कारण सुन्दा तपाइको होस उड्ने छ…..पूरा पढ्नु होस ।।
July 19, 2018 रोचक Comments Off on श्रीमानले गरे घर निकाला- कारण सुन्दा तपाइको होस उड्ने छ…..पूरा पढ्नु होस ।।
सुनसरी । छोरी जन्मिएको भन्दै सुनसरी दुहबीकी एक महिला दुई बर्षदेखि घरेलु हिसाबाट पिडित भएकी छिन् । दुहवी नगरपालिका ६ कि राधा साह छोरी जन्मिएको कारण श्रीमान र घरपरिवारबाट अपहेलित हुदै अहिले माईतमा बस्न बाध्य भएकी हुन् । साहले २० वर्षको उमेरमा २०७२ मा रामधुनी ३ प्रिपाहका २४ वर्षीय गोपाल साहसँग विवाह गरेकी थिइन ।
विवाह पछि छोरी जन्मिएको भन्दै श्रीमानले कुटपिट गर्ने गरेको र घरबाट निकालेको पिडित साहले इटहरी स्थित रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरि गुनासो गरिन् । दुई बर्षदेखि दुहबी माईतीमा बस्दै आएको र घर फिर्ता आउन श्रीमानले १० लाख माग गरेको बताइन ।
पत्रकार सम्मेलनमा आफु पिडित भएर पनि संम्बन्धित निकायले न्याय र चासो नदिएको साहले पत्रकार सम्मेलनमा बताइन । दुई बर्षको छोरी सहित पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थिति भएकी साहले आफु अन्यायमा परेको भन्दै दुहबी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दिएपनि सुनुवाई नभएको उनले जानकारी दिइन ।
आँफु छोरी जन्माएकै कारण श्रीमान र घरपरिवारबाट अलग भएको दुखेसो गरिन । उनले श्रीमान सहित ससुरा ललित साह, सासु छिनादेवी साहले घरबाट निकालेको र फिर्ता आउदा १० लाख ल्याउन पटक पटक दबाब दिएको उनले बताइन ।
मेरा श्रीमानले उर्लाबारीकी सावित्रा मगरलाई भगाएर घरमा ल्याए’ गहभरी आँशु पार्दै उनले भनिन्, ‘मलाई घरबाट निकालेर भगाएर विहे गरे, अहिले फोन गर्दा गाली गर्ने मार्ने धम्की दिन्छन् । साहको श्रीमानकै घरमा बस्न पाउनु पर्ने माग छ ।पुर्बेली न्युज बाट
कसैले तपाईको पैसा फिर्ता गरिरहेको छैन वा दुःख दिइरहेको छ भने अपनाउनुहोस यो सजिलो तरिका……पूरा पढ्नु होस ।।
नागको अन्डा देख्ने मान्छे भाग्यमानी हुन्छ रे ! तपाई पनि यो भिडियो हेर्नुस अनि शेयर गर्नुस !! (1,197)
यो भिडियो हेरेपछि कसको आखामा आसु आउदैन होला (भिडियो सहित) (1,134)
बुधबारको दिनमा श्रीकेदारनाथ मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर २०७५ माघ २ गते बुधबारको… (1,055)
‘नेपालमै खनिखोस्री गरी खाउ, मलेसिया नआउ’…सक्दो शेयर गरौ (946)